Ny Trust Living vs. Will ho an'ny fananganana fananan-tany sy ny fiarovana amin'ny asa
Ny Fiainana Miaina dia rakitra iray ahitana antoko telo lehibe:
Ny tranom-panjakana izay natokisana.
Ny mpitandrim-pananana, izay mitantana ny fitokisana.
Ireo tombony izay mandray soa avy amin'ny fitokisana.
Raha toa ka misy mpivady maromaro, ny fitokisana velona dia matetika dia milaza fa ny vola azo antoka dia mandeha amin'ny vady miaina, ary avy eo amin'ny zanany rehefa mandalo izy roa. Ho an'ny trano lehibe kokoa dia misy A / B Trusts izay ny Trust A dia mandoa ny antsasaky ny fananana mba handehanana any amin'ny vady miaina. Ny antsasany hafa dia miditra amin'ny fitokisana B ary ny vady sisa velona dia mahazo ny fidiram-bola avy amin'ny fitokisana B. Rehefa maty ny roa, ny Trust A sy Trust B dia handova ireo mpandova, ka hampiakatra avo roa heny ny sandan'ny famerenana ny haba.
Inona no atao hoe sitrapo?
Ny sitrapo iray, izay antsoina matetika hoe "sitrapo farany sy testamenta", dia avy amin'ny tahiry iray izay anoratana ny zavatra tianao hitranga amin'ny fanananao, ary koa ny faniriana hafa aorian'ny hahafatesanao. Misy olona iray mamaky ny sitraponao any amin'ny fitsarana an-dalambe taorian'ny nahafatesanao. Ny fitsarana kosa, indray mandeha, dia voampanga ho tompon'andraikitra amin'ny fampandrenesana ny fanirian'ny sitraponao ao anatin'ny fetran'ny lalàna.
Ankoatra ny filazanao izay tianao hatao amin'ny fanananao, dia misy koa ireto singa manaraka ireto:
Ny anaran'ny mpanatanteraka iray izay hiara-miasa amin'ny fitsarana hanatanterahana ny sitrapo.
Mety hanome anarana mpiambina ho an'ny ankizy madinika izany.
Toromarika momba ny fandoavana trosa sy ny fandoavana hetra.
Fanavotana ho an'ny biby
Afaka miasa ho toy ny famenoana ny fitokisana velona
Tsy toy ny fitokisana velively izy io, fa matetika no mandany fotoana
Tsy maintsy arovana ao amin'ny efitrano fitsarana
Ny saram-pitsarana mandany fotoana sy lafo ary lafo amin'ny fitsarana
Mpitsara no tokony hankatoaviny
Toy izao no tokony hataonao tsy ampiasao ny sitrapo:
Ny fifehezana ny fepetra momba ny famindrana trano (Fred dia tokony hahazo diplaoma dokotera alohan'ny handraisako ny kaontiko)
Toromarika momba ny fanangonana fandevenana
Mandao ny fananana amin'ny biby fiompy
Manao fandaharana mifanohitra amin'ny lalàna
Tombo-kevi-pandrosoana telo lehibe
Ny soso-kevitra dia ny dingana ara-dalàna amin'ny fizarana ny fananana avy amin'ny iray izay maty tamin'ny hafa. Mandritra io dingana io, mizara fanambarana momba ny famerenana ny fananana ny fitsarana. Ny ankamaroany dia misy ny saram-pandraharahana ary koa ny saram-pitsaboana mifandraika amin'ny fanaovana ny sitrapo amin'ny alalan'ny probate. Ankoatr'izay, ireo izay mahazo ny volan'ny sitrapo dia tsy afaka mandray izany avy hatrany; raha tsy efa nankatoavin'ny fitsarana ny fizarana. Ity dingana ity dia afaka mampifandray ny vola azo avy amina volana vitsy hatramin'ny taona maromaro.
Raha mitondra ny sitraponao any amin'ny bankinao ny mpandova anao ary manandrana manala ny vola aorian'ny fahafatesanao dia tsy hamela azy ireo hikasika ny vola ny banky. Tokony hanome alalana ny banky ny fitsarana fitsarana. Miaraka amin'ny fitokisana amin'ny fiainana an-kalalahana, etsy ankilany, tantara hafa izany. Ireo izay lazainao amin'ny fitokisana dia azo atao amin'ny ankapobeny any amin'ny banky, mitondra kopia ny fitokisana miaraka amin'ny famantarana azy sy ny taratasy fanamarinana ny fahafatesanao. Avy eo dia afaka manaisotra ny vola avy hatrany izy ireo mifanaraka amin'ny fifanarahana azo itokisana.
Ny fiarovana ny lalàna dia afaka omena ny olona manambady rehefa misy fitokisana roa ny fitantanana. Ny vola azo avy amin'ny asan'ny vadiny, ohatra, dia azo alaina amin'ny fitokisana araka ny tokony ho izy.
Fialofanao ny fanananao
Azonao atao ny mialokaloka amin'ny ampahany na ny ampahany betsaka amin'ny taninao raha toa ka manaraka ny fizarana 2056 sy 2041 amin'ny fehezan-dalàna momba ny hetra IRS.
Ny fanananao na ny vola ao amin'ny fitokisana mivantana anao dia tsy mitaky anao hanova ny fangatahana hetra federaly anao. Izy io dia mifanandrify aminao manao satroka misy lokony isan-karazany. Asehoy fotsiny ny fandoavan-ketra nataonao talohan'ny nahalalanao ny fitokisanao.
Araka ny voalaza tetsy ambony, ny fitokisana velona dia manalavitra ny fizotran'ny fandaniana sy lafo. Miaraka amin'ny fitokisana velona, ​​rehefa maty ny settler na ny maty dia afaka mahazo ny fitokisana ny fahazoan-dàlana raha tsy mahazo ny fitsarana sy ny mpisolovava mandray anjara amin'ny dingana. Izany dia mamonjy ny fotoana sy ny vola; mety ho vola be.
Ny fanjakana sasany dia mitaky saram-panafarana manan-danja, izay ampahany amin'ny vidin'ny vola be. Ity ny dikan'izany. Ohatra, avelao ny saram-piantsonan'ny fanjakana hamoaka saram-pandraharahana roa isan-jato (2%) amin'ny trano fitrandrahana. Mandova trano $ 2 tapitrisa ianao. Andeha hojerentsika fa ny tranon'io dia manana $ 2 tapitrisa tapitrisa voarakitra manohitra izany. Noho izany, misy ny lanjany ny zero. Noho izany, ny fitsarana dia afaka manangona roa isan-jato amin'ny lanjany lehibe amin'ny trano, na $ 40,000 amin'ny saram-panaovana saram-pitsarana ao amin'io tokantrano tsy manan-kialofana io. Raha nanana fitokisana velona ilay tokantrano, dia ho efa nahavonjy lehibe 40 ny anao (na ny mpandova anao).
Raha misy olona manohitra ny sitrapony, dia mety ho mendri-piderana ny saram-pandraharahana. Mahavariana ny faharetan'ny fifandovan'ny lovam-pianakaviana ho an'ny fahavalo maty. Nahita ady an-trano izahay izay nihazakazaka tao amin'ny dolara an-tapitrisany ary nidoroka zava-mahadomelina nandritra ny am-polo taonany.
Raha fintinina, avy amin'ny traikefa, hitantsika fa ny fitokisana ny fiainana dia manompo kokoa ny mpanjifa kokoa noho ny andriamanitra ho toy ny fitaovam-pambolena fototra. Manavotra azy ireo amin'ny aretim-po, fotoana, ary eny, vola. Noho izany dia napetrakay ho toy ny fitaovana fototra ny fitokisana. Avy eo dia napetraka ny sitrapo ho fitaovana fanampiny ho an'ireo zavatra izay tsy naverina tamim-pitokisana.
Ahoana no handefasana ny fananana hanana fitokisana amin'ny fiainana?
Manova ny lohatenin'ny trano ianao. Ohatra, mandeha any amin'ny bankinao ianao ary mitondra ny taratasy fitokisana anao. Mangataka ny banky ianao avy eo mba handefa ny kaontinao amin'ny fahatokisanao. Ho an'ny fananana tena izy, azonao atao ny mameno ny "taratasy fitakiana tsy misy fangarony" ary hamindranao ny fanananao amin'ny anaranao amin'ny fitokisanao. Matetika dia hampiasa karazana fitokisana iray hafa isika rehetra land trust mba hanana fananana tena izy.
Asongadinao ny fananana amin'ny "fandaharam-potoana" A.'"Ny fandaharam-potoana" A "dia sombin-taratasy izay matetika mifatotra amin'ny lamin'ny fahatokianao. Izy io dia manoritsoritra ny toetra tianao hampidirinao ao amin'ny fitokisanao. Ohatra, ny "cabinet china brown" na "The clock antique clock" avy any Alemana na ny "Printer My Hewlett Packard # JJ54436." Isaky ny manova ny fandaharam-potoanao "A" ianao dia tsara indrindra koa ny manamarina izany. Maro ny olona manavao ny fandaharam-potoany "A" indray mandeha isan-taona na rehefa mividy zavatra lafo.
Tsara kokoa ny manao ny roa amin'ireo voalaza etsy ambony raha azo atao. Ohatra, mangataha ny banky anao hanova ny lohateny ao amin'ny kaontinao amin'ny banky amin'ny anaran'ny fahatokianao. Azonao atao ihany koa ny manazava ny "Bank of America Account # 00533-01242" ao amin'ny fandaharam-potoanao "A." Afaka manampy amin'ny mpandova anao amin'ny banky samihafa sy ny kaonty fampiasam-bola koa ianao.
Azonao atao ny manova ny fitokisanao amin'ny fiainana azo havaozina amin'ny fotoana rehetra. Afaka ny ho mpitandrim-pananana ianao. Ny mpitandrim-pananana dia ilay mitantana ny fitokisana ary mihazona lohateny ara-dalàna amin'ny tompony amin'ny fahatokiana ny tombontsoan'ny olona hafa - na ny tenany. Ny mpitandrina dia takiana koa hanaraka ny toromarika voafaritry ny antontan-taratasim-pitokisana. Izany hoe afaka mifehy ny fitokisanao ianao. Azonao atao ny manova ny fahazoan-dàlana imbetsaka araka izay tianao. (Ireo mpandray tombony dia ireo izay mahazo ny vola natokisanao - matetika amin'ny fahafatesanao.) Raha tianao, dia afaka manana olon-kafa na orinasa miasa ianao amin'ny maha-mpitandrim-pananana. Ho an'ny antontan-taratasy fitokisana, amin'ny ankapobeny izy ireo dia manatanteraka ny adidiny eo ambany fitarihanao. Azonao atao koa ny manova hoe iza no tompon'andraikitra amin'ny fotoana rehetra. Afaka mametraka vola na fananana ao amin'ny fitokisanao ianao na manaisotra azy amin'ny fahatokisanao.
Betsaka ny olona manana fananana trano fivarotana trano no miantso fahatokisana hafa. Avy eo izy ireo dia manana orinasam-pifandraisana izay manome serivisy fitokisana. Ny fahatokisana dia manana anarana tsy misy ifandraisany amin'ilay olona izay natsangana. Ohatra, ny orinasam-pandraharahana # 24775. Noho izany, raha misy olona manao fikarohana an-tsoratra ao amin'ny rakitsoratry ny daholobe, dia tsy miseho ny anaran'ilay tompon'ny tombontsoa mahasoa amin'ilay trano.
Fiarovana sy fametrahana ny tany
Ny fananana fananana amin'ny tokam-piainana azo averina dia tsy manome fiarovana anao amin'ny maha-izy azy fa tsy hanana fananana mitovy amin'ny anaranao. Izany no mahatonga ny maro hampiasa ny fitokisana mivantana miaraka amin'ny fitaovana fiarovana. Maro ny olona mitazona anaram-boninahitra amin'ny fiaraha-miasa na orinasa tokana amin'ny fitokisany. Ohatra, ny ray aman-dreny dia mihazona ny fahalianany iombonana amin'ny 15% amin'ny fisokafany. Avy eo ny zanany dia mizara ny tombontsoam-piarahamiasa 85 sisa tavela.
Ny fitokiana velona dia tsy miaro ny fananana amin'ny raharaha manokana. Mety misy fiaraha-miasa voafaritra tsara ny orinasa na orinasa (jereo etsy ambony). Rehefa izany, rehefa mandalo ianao, ny ankamaroan'ny fiarahamiasa / fitantanana ankapobeny dia afaka mankany amin'ny olona fantatrao, toy ny zanakao. Ary manao izany izy raha tsy mila mandalo fomba fisedrana lafo sy mandany fotoana.
Manoro hevitra mafy izahay fa hijery ny fitokisana rehetra amin'ny antsipirihany amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fananganana trano. Ataovy izany alohan'ny fampiharana azy ireo ao amin'ny toekarena sy / na drafi-bola. Ny lalàna dia miova ary miova tsindraindray ary mety tsy mitovy ny zavatra ilainao manokana. Azonao atao ny mampiasa ny tarehimarika sy ny fangatahana fanadihadiana eto amin'ity pejy ity raha mila fanazavana fanampiny.